अव १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश
नेपालदृष्टि । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्युँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
मंगलबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान मंगलबार निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो ।
यस्ता छन संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेको आधारहरू :
१. बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ, २. नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ, ३. बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन, ४. प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन
१३ दिनमा बैठक बोलाउन आदेश
संसद विघटन बदर घोषित गरेको सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश समेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहृवान हुनुपर्ने हुनाले अब १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ । -दृष्टि न्युज
‘चङ्गा चेट’(नौ गीतका भिडियो सहित)
आफ्नो पहिचान,सम्वद्धनको लागि कार्यक्रम(भिडियो सहित)